FIFANDONANA MAHERY VAIKA :: Olona dimy namoy ny ainy voatifitra tany Belo Tsiribihina • AoRaha
FIFANDONANA MAHERY VAIKA Olona dimy namoy ny ainy voatifitra tany Belo Tsiribihina
Mafy ny fifandonana teo amin’ireo miaramila avy amin’ny Das sy ny fokonolona an-daniny ary dahalo am-polony maro kosa an-kilany, tany Begidro-Belo Tsiribihina, tamin’ny alakamisy lasa teo. Olona dimy no fantatra fa namoy ny ainy vokatry ny fifampitifirana mahery vaika. Ny efatra dia voalaza fa dahalo. Ny iray kosa avy amin’ireo fokonolona.
“Rehefa tonga hanafika io tanàna io ireo dahalo nirongo basy maro dia tsy nanaiky ireo mponina fa namaly. Nandritra izay fotoana izay, nisy nampandre ireo miaramila tsy lavitra ity toerana ity. Tonga teny an-toerana ireo miaramila saingy efa tafatsoaka ireo dahalo ka nisy ny fanarahan-dia”, hoy ny loharanom-baovao.
Ankoatra ireo maty voatifitra dia nisy dahalo roa ihany koa azo sambo-belona. Tamin’ny famotorana nataon’ny Zandarimaria no nahalalana fa avy any Miandrivazo ireo dahalo ireo. Hatramin’ny omaly, dia mbola manohy ny fikarohana an’ireo dahalo hafa tafatsoaka taorian’ity fifampitifirana ity ireo mpitandro filaminana ivondrononan’ny Tafika sy ny Zandarimaria.
LOZA AN-DRANOMASINA :: Lehilahy iray tsy hita popoka
FANONDRANANA SOKATRA :: Naiditra eny Antanimora ihany koa ireo Malezianina roa lahy